Mareykanka oo soo jeediyay xal aan dagaal aheyn in lala galo Al shabaab – Somali Top News
Mareykanka oo soo jeediyay xal aan dagaal aheyn in lala galo Al shabaab
Waxay kaloo ka digtay inay Alshabaab ka faa’ideysan doonaan marnaansha dhina Ammaanka marka ay Ciiddanka AMISOM ka wada baxaan gudaha Somalia, waa sida ay hadalka u dhigtay.
Dhinaca kale, Sarkaal 3-aad oo ka tirsan Taliska AFRICOM oo lagu magacaaboRamón Colón-López waxa uu tilmaamay in mid ka mid ah Waajibaadkiisa tahay sidii uu Ciiddanka DFS uga taageeri lahaa in mushaarka la siiyo iyo in si sax ah loo quusiyo, si aysan u aadin inay u dagaalamaan dhinaca qaldan, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu intaasi ku daray in Jilayaasha Dowladda looga baahan yahay inay ka go’an tahay inay sii ahaadaan Garsoore dhexdhexaad ah.
Ramón Colón-López waxa kale oo uu carrabka ku dhuftay inay Muwaadiniinta u aadaan Alshabaab arrimo asaas u ah Garsoorka.
Taliska Hawlgalka Milliteriga Maraykanka ee AFRICOM oo la asaasay bishii October ee sannadkii 2007-dii waxay Ciiddanka DFS iyo kuwa AMISOM ka taageeraan Duqeymaha lala beegsado goobaha ay ku xooggan yihiin Dagaalamayaasha Alshabaab iyo kuwa Daacishta Somalia.
← UNFPA calls for investigation into grave crime of child gang rape in Somali
Italy takes in 150 refugees flown in from Libya →